Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena any Ontario: Niakatra 7% ny isan'ireo mpandeha tamin'ny volana aprily
Ny habetsaky ny mpandeha tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena any Ontario (ONT) dia nisondrotra efa ho 7% tamin'ny volana aprily, nanohy ny firoboroboan'ny fitomboana tsy miova ho an'ny seranam-piaramanidina fitomboan'ny firenena haingana indrindra.
Raha ny angon-drakitra namboarin'ny manampahefana iraisam-pirenena momba ny seranam-piaramanidina ao Ontario (OIAA), dia mpandeha an'habakabaka 445,000 no namakivaky ny seranam-piaramanidina Inland Empire tamin'ny volana lasa, fitomboana 6.9% tamin'ny volana aprily tamin'ny taon-dasa.
Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny volana aprily, ny ONT dia nandray olona maherin'ny 1.6 tapitrisa tonga sy niainga, 5.2% mihoatra ny fe-potoana efa-bolana tamin'ity taona 2018 ity.
Ny Delta Air Lines dia nanomboka isan'andro, serivisy tsy an-kiato ho an'ny foiben'i Atlanta tamin'ny volana aprily ary hanomboka amin'ny Jona ny fihodinana faharoa. United Airlines sy Southwest Airlines koa dia hanampy serivisy vaovao amin'ny volana Houston ho any Houston sy San Francisco.
Mandritra izany fotoana izany dia nandrakitra fitomboana indroa indroa ao amin'ny volan'ny entana i Ontario tamin'ny volana aprily, nitombo 11% ny volana aprily lasa teo ka lasa 61,800 233,500 taonina. Nandritra ny efa-bolana voalohany tamin'ny taona, ny fandefasana entana dia maherin'ny 3.4 2018 taonina, XNUMX% avo kokoa noho ny vanim-potoana mitovy amin'ny XNUMX.
Ho an'ny vanim-potoana fitsangatsanganana fahavaratra manomboka ny zoma hatramin'ny andron'ny asa, tombanana ho 1.6 tapitrisa ny mpandeha hisidina sy hivoaka ny ONT, fiakarana 13.9% raha oharina amin'ny fahavaratra tamin'ny taon-dasa ary mihoatra ny inefatra ny tombam-bidin'ny fitetezam-paritany an'habakabaka.